လက်ကား Frosted matte ဖန်ဗလာဖယောင်းတိုင်အိုးများစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Winby
ဖုန်း : +8615932288852
TC20 2oz wax ပမာဏအနှိပ်ဖယောင်းတိုင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီဂ...
ရွှေရောင်တောက်တောက် အနက်ရောင်ဖြင့် ဇိမ်ခံမီးမွှေးထားသော ဖယောင်းတိုင်များ...
matte သဘာဝဖယောင်းရနံ့ ဇိမ်ခံဖယောင်းတိုင်-အပြာ
matte glass soy scented feature ဖယောင်းတိုင်
DIY ပြုလုပ်ရန်အတွက် ချည်သားဖယောင်းတိုင် မီးစာ
Church Candle အတွက် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ - အော်ဂဲနစ်...
OEM China သီးသန့်တံဆိပ်ဖယောင်းတိုင်များ - သဘာဝပျားဖယောင်း C...
ကြာရှည်ခံရန် အရည်အသွေးမြင့် ဖယောင်းတိုင်များ - Ceramics ja...
OEM/ODM စက်ရုံ Valentine\_\_\_'s Day Candle - 7...
အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး Glass Candle - Cotton Candle Wick with...
Frosted Matte ဖန်ခွက်ဗလာ ဖယောင်းတိုင်အိုး
ဤဖယောင်းတိုင်ခွက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သုံးစွဲသူများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားသည်။Customer များအတွက် ရွေးချယ်စရာ အရောင်များစွာရှိပါသည်။ဖယောင်းတိုင်ပုံးအားလုံးကို သစ်သား သို့မဟုတ် ဝါးအဖုံးဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ခွက်ပေါ်တွင် ကုမ္ပဏီလိုဂိုကို ပုံနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စတစ်ကာများပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အရောင်ထည့်ခြင်းစသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်း- A02M၊ A03M၊ A07M
အရွယ်အစား- D6.2CM*H8.1CM၊ D7.2CM*H9.1CM၊ D8.2CM*H9.8CM
Frosted Matte ဖန်ဗလာဖယောင်းတိုင်
1. ဖယောင်းတိုင်အိုးကို အရွယ်အစားနှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို လက်ခံပါသည်။
2. ဤဖယောင်းတိုင်ပုလင်းကို နှင်းခဲဖန်နှင့် ဝါးအဖုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မျက်နှာပြင်အသွေးသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖောက်သည်များ၏ လိုဂိုကိုလည်း ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
ဖယောင်းတိုင်အိုးများကို အုတ်ခွက်ဘုရားများ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်မီးဖယောင်းတိုင်များဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထမင်းစားပွဲ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဘေးစားပွဲများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်အလှဆင်ခြင်း။
စကားလုံး၊ အရွယ်အစား၊ လိုဂို၊ အရောင်အားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အရည်အသွေးကောင်း၊ များပြားသောစျေးနှုန်းနှင့် ထိပ်တန်းအဆင့်ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
အရွယ်အစား D6.2CM*H8.1CM D7.2CM*H9.1CMM: D8.2CM*H9.8CM
ပစ္စည်း ဖန်ခွက်နှင့် ဝါးအဖုံး
အလေးချိန် 175g 225g 345g
အဖွဲ့ဝင် သစ်သားအဖုံး သို့မဟုတ် ဝါးအဖုံး
အရောင် အဖြူ ၊ အနက် ၊ မီးခိုးရောင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု စိတ်ကြိုက်/ODM OEM/နမူနာ
MOQ 3000 pcsကျွန်ုပ်တို့တွင်စတော့ရှိလျှင်သေးငယ်သောအော်ဒါများကိုလက်ခံနိုင်သည်။
ပထမဦးဆုံး,ငါတို့မှာရှိတယ်။လက်မှတ်ယူရိုစံနှုန်းအောက်မှာ။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယောင်းတိုင်များသည် ဥရောပစံနှုန်းအတိုင်း ကောင်းမွန်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယောင်းတိုင်များ၏ အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ရုရှား၊ ဥရောပ၊ အရှေ့တောင်ဘက်စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအများအပြားနှင့် ဒေသအများအပြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ဖောက်သည်များက ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိကြသည်။
သို့သော်ငြားလည်း,ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ခွက်ဖယောင်းတိုင်ကို အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများနှင့် eco-friendly glassware များဖြင့်အသုံးပြုထားပြီး၊ ၎င်းသည် ယုတ်ညံ့သောဖန်မဟုတ်သည့်အပြင် လူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ဖန်ခွက်တိုင်အိုးများ၊ ပန်းရန်အိုးများ၊ squire ဖန်အိုးများ၊ ပူတင်းဖန်ဖယောင်းတိုင်အိုးများ၊ ယန်ကီးစတိုင်ဖန်အိုးများ ကဲ့သို့သော သင့်စိတ်ကြိုက်ဖန်ခွက် အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။
ထိုမှတပါး၊ဖန်ဖယောင်းတိုင်အိုးများကို matte၊ frosted၊ polished၊ spraying ကဲ့သို့ မတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။သင်နှစ်သက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ဖန်ခွက်ပေါ်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် တံဆိပ်များကို ရိုက်နှိပ်လိုပါကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။မင်းရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ငါတို့ဆီ ပို့ပေးဖို့ပဲလိုတယ်၊ ငါတို့က မင်းအတွက် ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ rendering လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
ဖြည့်စွက်ကာ,သင့်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် မတူညီသောအဖုံးများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ဖန်အိုးပေါ်တွင် လှပသော ဝါးအဖုံး၊ သစ်သားအဖုံး၊ သတ္တုအဖုံးများရှိသည်။
နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရန် ဖန်ဖယောင်းတိုင်အိုးများကို ထုပ်ပိုးရန် လေကော်လံပူဖောင်းအိတ်ကို အသုံးပြုပါသည်။ထုတ်ကုန်များကို သုံးစွဲသူများထံ ဘေးကင်းစွာ ပို့ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ထုတ်ကုန်များကို အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပေးပါမည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှ နှစ်သက်ဖွယ်မှတ်ချက်အချို့ဖြစ်သည်။
ယခင်- ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် Candle Wick Centering Device
နောက်တစ်ခု: ဝါးအဖုံးဖြင့် ပွတ်ထားသောဖန်အိုး
Frosted Glass Candle အိုး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖယောင်းတိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နှစ် 20 အတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မွှေးပျံ့သောဖယောင်းတိုင်များ၊ ဖယောင်းတိုင်အိုးများ၊ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူများ၊ ပဲဖယောင်းများ၊ ချည်သားမီးစာများ၊ သစ်သားမီးစာများ၊ ဖယောင်းတိုင် DIY ကိရိယာများနှင့် အခြားဖယောင်းတိုင်ပစ္စည်းများကို အဓိကထားပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်စိတ်ကူးများနှင့် ဒီဇိုင်းအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါသည်။
R100 100ml တန်ဖိုးကြီး စတစ်ကာ အိမ်သုံး မီးတောက်မဟုတ်သော...
ပူပူနွေးနွေး အနံ့မွှေးပျံ့သော ဖန်ဖယောင်းတိုင်
E125 နောက်ဆုံးပေါ် သစ်ရွက်ပုံသဏ္ဍာန် ထွင်းထုထားသော ဖယောင်းတိုင်
ငိုသံဖြင့် အလှဆင်ထားသော chakra ရနံ့ ပဲပိစပ်ဖယောင်းတိုင်များ...
O41 ဇိမ်ခံ စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်နှင့် အဖုံး ကြီးမားသော ဖန်ခွက်...
4-E-428၊ Power Science Valley၊ အမှတ် 3088 Lekai North Street၊ Baoding၊ Hebei၊ China
© မူပိုင်ခွင့် 20192021 : All Rights Reserved.>